Manni murtii Iraaq lammiilkee Faransaay miseensota garee IS irratti murtii du'aa dabarse - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Namoonni 3'n waraana garee 'Islamic State (IS)' seenuun himataman (suuraa kuusaa keessaa)
Lammiileen Faransaay sadii garee waraanaa IS jedhamu keessa seenuun isaa mirkanaa'e jennaan manni murtii Iraaq murtii du'aa irratti dabarse.
Namoonni kuni ol iyyachuuf guyyoota 30 qabu. Kunneen lammiilee Faransaay 12 loltoota Yunaayitid Isteetin deeggaramaniin Sooriyaa keessatti qabamanidha. Onkololeessa keessa dhimmi isaanii mana murtiitti haa ilaalamuuf Iraaqitti dabarfamanii kennaman.
Sadan murtiin irratti darbe kuni lammiilee Faransaay jalqabaa duuni irratti murtaa'edha.
Barattuun miseensa IS taate qe'eekotti deebi'uun fedha jette
Murtee mana murtii Dilbataa Baagdaad raawwate irratti hanga ammaa Faransaay yaada kennite hin qabdu. Guraandhala, keessa pirezidantiin biyyattii yeroo gaafatamanitti dhimma biyya biraa keessa seenun dubbachuu akka hin feene dubbatani turan.
Gareen mirga namoomaa loltoota IS ta'un shakkamani kanneen mana murtii dhihaatan irratti qeeqa guddaa dhiheessaa ture.
Rogeeyyiin immoo manneen murtii yeroo caalu isa shakkamtoonni dhugaa bahan irratti hundaa'u jechuun qeequ.
Lammiilee biyya alaa IS seenan irratti maaltu ta'e?
Namoonni 41,000'tti tilmaamamaniifi biyyoota hedduurraa dhufan garee waraanaa 'Islamic State (IS)' ofiin jedhuufi Sooriyaafi Iraaq argamutti makamaniiru. Kana keessaa 1/4ffaan dubartootaafi daa'immanidha.
6,000 kan ta'an Lixa Awurooppaa irraa kan dhufan yoo ta'u, UK irraa 850 ta'u.
Loltoonni IS gara caalu ajjeefamaniiru yookiin qabamaniiru. Meeqa akka ajjeefaman wanti beekame hin jiru.
Qorattoonni akka jedhanitti 7,000 kan ta'an biyya isaanitti deebi'aniiru.
Biyyoonni kuni lammiilee biyyattii deebisuufi mana murtiitti himachuuf ragaa walitti qabu irratti yaaddoo qaban ibsaniiru.
Hidhattoonni IS Somaaliyaatti lammiilee Itoophiyaa sadii ajjeessan
Barattuun miseensa IS taatee fi kaampii Sooriyaa keessa jiraachaa jirtu manattin deebi'uun fedha jette